Hooyo Caruurteedii La La'yahay Mudo Bilooyin Ah Oo Loo Xidhay Kiiska Caruurteeda - Borama News Network %
Hooyo Caruurteedii La La’yahay Mudo Bilooyin Ah Oo Loo Xidhay Kiiska Caruurteeda
Hooyo Ameerikaan ah oo muddo bilooyin ah la la’aa laba canug oo yaryar oo ay dhashay ayaa waxaa lagu xiray gobolka Hawaii xilli gudaha waddankaasi ay ku sii baahayso howlgalka baadigoobka carruurtaasi.
Lori Daybell, oo ah 46-jir, ayaa waxa ay gobolka Hawaii ka tagtay bishii Nofeembar kaddib markii booliska gobolka Idaho ay su’aalo ka waydiiyeen carruurteeda, kuwaas oo ay askartu sheegayaan inay halis ku sugan yihiin.
Mrs Daybell ayaa waxaa la sheegay in lala xiriiriyay koox diimeed, sida ay ku warramayso warbaahinta Mareykanka.
Waxa ay wajahaysaa laba dacwadood oo ah inay carruurteedii isaga tagtay iyo in jasiiradda Kauai looga haysto damaanad lacageed oo gaaraysa $5m.
Waxa ay u guurtay Idaho iyadoo ka timid Arizona dabayaaqadii bishii Agoosto kaddib markii ninkii ay markaas wadajoogeen, Charles Vallow, uu toogasho ku dilay walaalkeed Alex Cox.
Cox ayaa waxa uu ku andacooday in markii uu ninka tooganayay uu isdifaacayay. Ninkaas oo laf ahaantiisa sababo aan la ogayn u dhintay bishii Diseembar.
Bishii Nofeembar, booliska ayaa waxa ay waceen awoowayaasha mid ka mid ah carruurteeda si ay u waydiiyaan in qoyska ay ku sugan yihiin gurigooda ku yaal magaalada Rexburg, ee gobolka Idaho.
Saraakiisha ayaa sheegay in goor dambe ay ogaadeen in Joshua “JJ” Vallow, oo todoba jir ah, iyo Tylee Ryan, oo 17-jir ah, aanan la arkin tan iyo bishii Sibteembar.
Mas’uuliyiinta ayaa sheegay in Mrs Daybell ay jawaabo marin habaabin ah ka bixisay su’aalaha baarayaasha oo ay been cad ka sheegtay halka ay ku sugan yihiin iyo inay jiraanba. Waxa ay magaalada isaga tagtay maalintii xigtay. Mas’uuliyiinta ayaa ka baaray bakhaar halkaas ka ag dhaw waxa ayna heleen dhar iyo waxyaabaha ay carruurta ku dheelaan kuwaas oo u muuqday inay carruurteeda leeyihiin.
Sida ku cad dikumintiyo furriin oo uu gudbiyay ninkii qabay haweynaydaasi ka hor inta uusan dhiman, ayey Mrs Daybell rumaysan tahay in “Alle uu u xilsaaray inay ka shaqeyso imaanshiyaha labaad ee Ciise July 2020”.
Sidoo kale inay ugu gooddisay inay dilayso haddii uu arrintaas ka hor istaago, iyadoo ku andacootay inay haysato “malaa’ig ka caawinaysa inay meelgaliso maydka”. Gooddiga kaddib waxa uu qaatay amar lagu ilaalinayo, waxaa sidaas muujiyay dikumintiga maxkamadda.
Waxa uu ku tilmaamay inay tahay “qof khafiifay, oo mararka qaar aad ugu waalan habka dhimashada iyo riyooyinka ruuxiga ah”, waxa uu sheegay inay diidday inay aragto dhakhaatiirta sababtoo ah “waxa ay ogaanayaan inay tahay qof meel kale jiro”.
Mrs Daybell ayaa bishii Oktoobar dib u guursatay Chad Daybell.
Sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inay maxkamadda quursatay, kaddib markii ay soo xaadiri waysay waqti kama dambays ah oo loo qabtay bishii Janaayo si ay carruurteeda ugu wareejiyo mas’uuliyiinta, iyo weliba inay carqaladaysay askari, dambi raadin iyo inay maxkamadda quursatay.
Waxa ay wajahaysaa ilaa 14 sanadood oo xarig ah waa haddii la xukumo waxa ayna sugaysaa in dib loogu celiyo gobolka Idaho.
Bernie Sanders Oo Ruushka Uga Digay ‘Inuu Ka fogaado Faragalinta Doorashooyinka Mareykanka’
Dowlada Somaliya Oo Sexeexday Heshiis Mamnuucaya Faa’iidada Gantaalada Balaastikada
Cudur Cusub Oo Baabi’inaya Dhirta Oo Ku Faafay Qaarada Yurub
Bnnstaff Bnnstaff April 15, 2020
Wararkii Ugu Dambeeyay Xiisada Ka Aloosan Gobolka Bariga Dhexe
Bnnstaff Bnnstaff January 5, 2020 January 5, 2020
Dowlada Jaban Oo Dil Ku Xukuntay Nin Dilay 19 Qof Oo Naafo Ah
Bnnstaff Bnnstaff March 16, 2020 March 16, 2020